Ciidamada Booliska Dowladda Soomaaliya oo holwgallo dad lagu soo qabqabtay Muqdisho ka fuliyay Axad, October, 21, 2012 (HOL)-Ciidamada Booliska Dowladda Soomaaliya ayaa howlgallo ayaa saaka ka sameeyeen magaalada xaafado ka tirsan Degmooyinka Magaaalada Muqdisho ayaa waxay ku soo qabqabteen rag hubeysan oo dil iyo dhac ka geystay. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Taliyaha Ciidamada Booliska Gobolka Banaadir Jen. Axmed Xasan Maalin ayaa sheegay in howlgalka ay sameeyeen ciidamada lagu soo qabtay labo nin oo hubeysan, kuwaasi oo dil iyo dhac geystay. “Labada nin ee la soo qabtay mid waxaa uu jidka u galay oo uu rasaaseeyay ciidamada dowladda oo qof dembile ah waday, halka midka kalena uu qof rayid ah ku toogtay Isgoyska Bakaaraha, haatanna labadaas nin waxa ay ku xiran yihiin xarunta baarista dembiyada”ayuu yiri Jen. Axmed Xasan Maalin.
Axad, October, 21, 2012 (HOL)-Abaanbuulaha Ciidamada Dowladda Soomaaliya Jen. Cabdikariin Yuusuf Dhego-badan ayaa shaaciyay howlgallo baaxad leh oo ay qorsheynayaan in ay dhawaan sameeyaan, kuwaasi oo ay ku doonayaan in ay Magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka isku xiraan. Golaha Wakiillada oo dood ka yeeshay xeerka mihnadlayaasha caafimaadku ku shaqayn lahaayeen 10/21/2012 6:29 AM EST